आइतबार मार्च 14, 2021 |
आइतबार मार्च 14, 2021
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: मत्ती6: 33
“तिमीहरू अरू थोकभन्दा परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको विषयमा इच्छा गर। तब उहाँले तिमीहरूलाई तिमीहरूले चाहेका यी जम्मै कुराहरू दिनुहुनेछ।”
भजनसंग्रह 23 : 1-6
1. भजनसंग्रह 37 : 3-5
3 यदि तिमीहरू परमप्रभुमा भरोसा गर्छौ र राम्रो कामहरू गर्छौ भने तिमीहरू भूमिले दिने धेरै चीजहरूसित बाँच्नेछौ र आनन्द लिने छौं।
4 आनन्दसित परमप्रभुको सेवा गर अनि उहाँले तिमीहरूलाई तिमीले चाहको कुराहरू दिनुहुनेछ।
5 परमप्रभुमाथि भरोसा गर। उहाँ माथि भरोसा गर अनि के गर्नु पर्नेछ उहाँले गर्नु हुनेछ।
2.2राजा4: 1-7
3. यर्मिया 29 : 11-13
11 म यसो भन्छु किनभने तिमीहरूका निम्ति मैले बनाएका योजनाहरू म जान्दछु।” यो परमप्रभुबाट आएको सन्देश हो, “मसँग तिमीहरूको लागि राम्रो योजनाहरू छ। म तिमीहरूलाई चोट पुर्याउने योजना बनाउदिन। मैले तिमीहरूलाई आशा र असल भविष्य दिने योजना गरेको छु।
12 त्यसपछि तिमीहरूले मलाई बोलाउनेछौ, मकहाँ आऊ अनि मलाई प्रार्थना गर। म तिमीहरूलाई प्रार्थनाको उत्तर दिनेछु।
13 तिमीहरूले मलाई खोज्नेछौ। अनि जब तिमीहरू आफ्ना तनमन लगाएर मलाई खोज्नेछौ, तिमीहरूले मलाई पाउनेछौ।
4. यूहन्ना6: 3-14, 26, 27 (तिर :), 29 (यो), 37, 38, 41 (तिर 1st ,), 42, 43, 47, 48, 63
41 यहूदीहरूले येशूको विषयमा गुनासो प्रकट गर्न शुरू गरे।
5. मत्ती 6: 24-26 (तिर.), 34 (तिर 1st.)
6. फिलिप्पी4: 4-7
यसको विज्ञानमा रहेको वास्तविकता र क्रम बुझ्न, तपाईंले भगवानलाई वास्तवमै सबैको ईश्वरीय सिद्धान्त मान्नु पर्छ। आत्मा, जीवन, सत्य, प्रेम, एकको रूपमा जोड्नुहोस्, - र भगवानको लागि धर्मशास्त्रीय नामहरू हुन्। सबै पदार्थ, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता, अस्तित्व, अमरत्व, कारण र प्रभाव ईश्वरको हो।
2. 468 : 17 (पदार्थ)-22
पदार्थ भनेको त्यो हो जुन अनन्त र असन्तुष्ट र असन्तुष्ट र क्षयको लागि अक्षम छ। बाइबलमा हिब्रू भाषामा यो शब्द प्रयोग भएको हुनाले सत्य, जीवन र प्रेमको सार हो: "चीजहरूको लागि आशा राख्नु भएको चीजहरूको प्रमाण होईन।" आत्मा, मन, आत्मा, वा भगवान का पर्यायवाची शब्द, केवल वास्तविक पदार्थ हो।
जसरी परमेश्वर पदार्थ हुनुहुन्छ र मानिस ईश्वरीय मूर्ति र समानता हो, त्यसकारण मानिसले चाहेको चाहिन्छ, र वास्तविकतामा केवल असलको पदार्थ मात्र हो, आत्माको पदार्थ, कुनै फरक पर्दैन। मानिसमा अरु कुनै पदार्थ, वा दिमाग छ भन्ने विश्वास आत्मिक छैन र पहिलो आज्ञालाई भ्ग गर्दछ, तपाईसँग एक परमेश्वर हुनुहुन्छ, एक दिमाग। मर्टल मानिसलाई आफैलाई भौतिक पदार्थ जस्तो देखिन्छ, जबकि मानिस "छवि" (विचार) हो। भ्रम, पाप, रोग, र मृत्यु भौतिक ज्ञानको झूटा गवाहीबाट उत्पन्न हुन्छन्, जुन अनन्त आत्माको केन्द्रित दूरी बाहिरको अवधारणाबाट मन र पदार्थको उल्टो छवि प्रस्तुत गर्दछन् र सबै चीजको साथमा उल्टो हुन्छन्।
सुरूदेखि अन्तसम्म, धर्मशास्त्रमा आत्मा, माइन्ड, मा पदार्थको विजयको विवरणहरू छन्। मोशाले मनको शक्ति प्रमाणित गरे जसलाई मानिसहरूले चमत्कार भन्छन्; यहोशू, एलिया र एलीशाले त्यसै गरे। इसाई युग चिह्न र चमत्कारका साथ शुरू गरिएको थियो।
चमत्कार त्यो ईश्वरीय प्राकृतिक हो, तर मानव रूपमा सिक्नु पर्छ; विज्ञानको घटना।
एक चमत्कारले परमेश्वरको व्यवस्थालाई पूरा गर्दछ, तर त्यो व्यवस्था उल्ल .्घन गर्दैन। वर्तमानमा यो तथ्य आश्चर्यकर्म भन्दा धेरै रहस्यमय देखिन्छ।
तथाकथित खनिज, तरकारी, र पशु पदार्थहरू अब समय वा भौतिक संरचनामा भन्दा बढी आविष्कारक छैनन् "बिहानको ताराले सँगै गाए।" दिमागले "जमिनमा हुनु भन्दा पहिले खेतको बोट" बनायो। आध्यात्मिक आरोहणको अवधि भनेको माइंडको सृष्टिका दिनहरू र छन् तुहरू हुन्, जसमा सुन्दरता, उच्चता, शुद्धता, र पवित्रता - हो, ईश्वरीय प्रकृति - मानिसमा देखा पर्दछ र ब्रह्माण्ड कहिल्यै हराउँदैन।
आत्मा केवल एक मात्र पदार्थ र सृष्टिकर्ता होइन भन्ने सिद्धान्त पन्थेटिस्टिक हेटेरोडोक्सी हो, जुन रोग, पाप र मृत्युमा समाप्त हुन्छ; यो शारीरिक आत्मा र भौतिक दिमागमा विश्वास हो, शरीर र आत्माले नियन्त्रणमा राख्छ। यो विश्वास उथलपुथलवाद हो।
ईश्वरीय विज्ञानले नयाँ दाखमद्यलाई पुरानो बोतलहरूमा राख्दैन, आत्माको कुरा गर्छ, न अनन्तलाई परिमित हुन्छ। आत्माको तथ्यहरु बुझ्ने बित्तिकै हाम्रो विषयमा गलत धारणाहरु नष्ट हुन्छन्। पुरानो विश्वासलाई त्याग गर्नुपर्दछ वा नयाँ विचार छल्नुपर्नेछ, र हाम्रो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने प्रेरणा हराउनेछ।
भौतिक स्वार्थतामा समाहित हुन्छ हामी चिन्न र प्रतिबिम्बित गर्दछौं तर जीवन वा दिमागको द्रुत चीज। भौतिक स्वार्थको इन्कारले मानिसका आत्मिक र अनन्त व्यक्तित्वको विवेकलाई सहयोग पुर्‍याउँछ, र पदार्थबाट प्राप्त गरेको गलत ज्ञानलाई नष्ट गर्दछ वा जसलाई भौतिक इन्द्रियहरु भनिन्छ।
ट्रायलहरूले मरणशीलहरूलाई भौतिक स्टाफमा झुकाव नराख्न सिकाउँछ, - भाँचिएको टाउको, जसले मुटु छेड्छ। हामीले आधा यो आनन्द र समृद्धिको धूपमा याद गर्दैनौं। दु: ख वेश्या हो। ठूलो स मार्फत्कष्टको माध्यमबाट हामी राज्यमा प्रवेश गर्दछौं। परीक्षाहरू परमेश्‍वरको हेरचाहको प्रमाण हुन्। भौतिक आशाको माटोमा रोपिएको बीउबाट आध्यात्मिक विकास पलाउँदैन, तर जब यो क्षय हुन्छ, प्रेमले फेरि नयाँ आत्मालाई बढाउँदछ, जसको पृथ्वीको कुनै दाग हुँदैन। प्रत्येक क्रमिक अनुभवको अनुभवले ईश्वरीय भलाइ र प्रेमको नयाँ विचार प्रकट गर्दछ।
के तपाईं अझै त्यस्तो समय आउँनुभएको छैन जुन आत्मालाई पर्याप्त र शरीरलाई नियन्त्रण गर्न सक्षमको रूपमा चिन्ने? येशूलाई याद गर्नुहोस्, जसले झण्डै 19 पहिले शताब्दी अघि आत्माको शक्ति प्रदर्शन गर्नुभयो र भन्नुभयो, "जसले ममाथि विश्वास गर्दछ, उसले म गर्ने काम उसले पनि गर्नेछ," र जसले यो पनि भन्‍यो, "तर समय आइरहेछ, र अब, कहिले हो साँचो उपासकहरूले आत्मा र सत्यतामा पिताको आराधना गर्नेछन्। " “हेर, अब ग्रहणयोग्य समय आएको छ, हेर्नुहोस्, आज मुक्ति दिने दिन छ,” पावलले भने।
प्रत्येकले निर्णय गर्नका लागि पोइन्ट हो, यो नश्वर दिमाग हो वा अमर दिमाग हो जुन कारक हो। हामीले मेटाफिजिकल विज्ञान र यसको ईश्वरीय सिद्धान्तको लागि पदार्थको आधार त्याग्नु पर्छ।
जुनसुकै कुराले यसको सिद्धान्त द्वारा संचालित विचारको समानता प्रदान गर्दछ, सोच्नको लागि खाना प्रदान गर्दछ।
अहिलेसम्म प्रचार गरिएको सबैभन्दा उत्तम उपदेश सत्यको अभ्यास र पाप, बिमारी र मृत्युको विनाशद्वारा देखाइएको हो। यो कुरा थाहा पाउँदा र हामीलाई थाहा छ कि एउटा प्रेम हामीमा सर्वोच्च हुन्छ र हाम्रो जीवनमा नेतृत्व लिन्छ, येशूले भन्नुभयो, "कोही पनि दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन।"
हामी झूटा आधारहरूमा सुरक्षित रूपमा निर्माण गर्न सक्दैनौं। सत्यले नयाँ प्राणी बनाउँछ, जसमा पुरानो चीज बितेर जान्छ र "सबै कुरा नयाँ हुन्छन्।"
मेटाफिजिक्स भौतिकी भन्दा माथि छ, र पदार्थ मेटाफिजिकल परिसर वा निष्कर्षमा प्रवेश गर्दैन। मेटाफिजिक्सका कोटिहरू एक आधारमा, दिव्य दिमागमा विश्राम गर्दछ। मेटाफिजिक्सले चीजहरूलाई विचारहरूमा समाधान गर्दछ, र सोलको विचारहरूको लागि भावनाको वस्तुहरूको आदान प्रदान गर्दछ।
यी विचारहरू पूर्ण रूपमा आध्यात्मिक चेतनाको लागि वास्तविक र मूर्त छन्, र तिनीहरूसँग भौतिक लाभको वस्तुहरू र विचारहरूमा यो फाइदा छ - ती असल र अनन्त छन्।
शरीरबाट टाढा सत्य र प्रेममा हेर्नुहोस्, सबै खुशी, सद्भाव र अमरत्वको सिद्धान्त। स्थिर, राम्रो, र सत्यको लागि स्थिर सोच राख्नुहोस्, र तपाईं यसलाई आफ्नो अनुभवमा उनीहरूको विचारहरूमा उनीहरूको पेसामा ल्याउनुहुनेछ।
किनभने परमेश्वर असीम, सबै शक्ति, सबै जीवन, सत्य, प्रेम, सबै भन्दा माथि छ र सबै।